I-PhoneGap: Ukuthuthukiswa Kohlelo Lokusebenza Kwamaselula | Martech Zone
I-PhoneGap: Ukuthuthukiswa Kohlelo Lokusebenza Kwamaselula
NgoMsombuluko, Agasti 3, 2009 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2018 Douglas Karr
Uma ngabe unolwazi lokuthuthuka ngezilimi eziningi, ngaphandle kwenhloso C, uzothola impendulo efanayo naleyo eyenziwe yilo mfana:
Ngithengile incwadi ngayifunda, ngabuka ama-movie, ngafaka ifayili le- LAPHA futhi angikakwazi ukuphazamisa ukungena kwami ​​kuhlelo lokusebenza oluthi, "Sawubona Mhlaba!".
Siyabonga okuhle ukuthi kukhona abanye onjiniyela abahlakaniphe ngendlela emangalisayo laphaya abakubonayo lokhu futhi beza nesisombululo esihle. Njengoba iningi lonjiniyela lisakhela iwebhu kulezi zinsuku, iqembu elilodwa elinethalente lafika nesisombululo esihle kakhulu, I-PhoneGap.
Sibonga u UStephen Coley ithiphu!
I-Akhawunti eyodwa ye-Google Analytics, Izizinda Eziningi
I-Webtrends 9 Ikhululiwe: Idlula Konke Okulindelwe
Aug 14, 2009 ngo-4: 09 PM
I-Appcelerator futhi ihlinzeka ngendlela engeyona yeNhloso-C yokuthuthuka ku-iPhone. http://www.appcelerator.com/
Aug 20, 2009 ku-11: 26 AM
kupholile, lokhu kubukeka njengethuluzi elithandekayo ongalihlola, ngizokwengeza lokhu ku- my ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lweselula